Niteraka ahiahy momba ny zon’olombelona ny lafatra ‘fiarovana an-tserasera’ vaovao any Oman · Global Voices teny Malagasy
Niteraka ahiahy momba ny zon'olombelona ny lafatra ‘fiarovana an-tserasera’ vaovao any Oman
Manome alalana ny lamina famoretana ny lafatra Foibe Fiarovana Anjotra
Voadika ny 07 Oktobra 2020 6:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, عربي, Italiano, Ελληνικά, Español, русский, українська, Nederlands, Esperanto , English
Lehilahy mitazona ny findainy manoloana ny lapa iray ao Oman. Sary tao amin'ny Pikist, azo ampiasaina malalaka.
Fanamarihan'ny toniandahatsoratra: Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraka ao amin'ny Foibe Helodrano Mandala ny Zon'Olombelona (GCHR), fikambanana mahaleo tena tsy mitady tombontsoa mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, sady fikambanana no fivoriambe milamina any amin'ny faritra Afovoany atsinanana Afrika Avaratra.
Raha mbola variana amin'ny fiantraikan'ny COVID-19 izao tontolo izao dia nandany didim-panjakana vaovao izay manome ny fahefana feno ho an'ny manampahefana hifehy ny aterineto sy ny angondrakitra rehetra ampitaina ao amin'ny firenena ny Soltanà an'i Oman. Vao maika sarotra kokoa ho an'ny mpitsikera sy ny mpanohitra ny fampitana vaovao tsy mampitera-doza fanampiny.
Tamin'ny 10 Jona, namoaka ny didim-panjakana laharana faha-64 taona 2020 ny Sultan Haitham bin Tarik, nanangana ny Foibe Fiarovana An-tserasera, ho sampana mifandray amin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana Anatiny (ISS), malaza ratsy amin'ny fanafoanana tsy mitsahatra ny fahalalahan'ny daholobe, anisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny aterineto. Tamin'ny 14 Jona, namoaka ny fomba fiasan'ity foibe ity, izay ahitana andininy miisa 11 ny Gazety Ofisialy laharana faha 1345.
Manome fahefana feno ny ISS hifehy ny tambajotram-pifandraisana sy ny lafatra (teny ilazana ihany koa ny systeme izay nadika hatrany ho rafitra teo aloha) fampitam-baovao ao amin'ny firenena ny lafatra ny Foibe Fiarovana An-tserasera. Mametraka ny ISS hitantana ity Foibe ity ilay didy hitsivolana.
Manome fahafahana ho an'ny Foibe Fiarovana An-tserasera hanafatra fitaovana sy rindrambaiko raitra izay manakana ny tranonkala na hanara-maso akaiky ny aterineto ihany koa ilay lafatra. Tsy ny fanaraha-maso fotsiny ny tambajotra elektronika ao amin'ny firenena ihany no azon'ny foibe atao fa ny fanilihana izany koa ”mba hamahana ny fandrahonana mety hanimba ny lafatry ny fiarovam-pirenena, na ny toekaren'ny Soltanà, na ny fifandraisany eo amin'ny sehatra iraisampirenena sy isa-paritra.”
Midika io didy hitsivolana vaovao io fa mifehy tanteraka ny fitaovana sy ny angondrakitry ny andrim-panjakana sy vondron'olona rehetra ny ISS ary afaka mampiasa izany fanaraha-maso izany mba hanomezany porofo sy torohay momba ireo mpikatroka amin'ny aterineto izay maneho ny heviny mifanohitra amin'ny governemanta amin'ireo resaka raharaham-bahoaka. Mety hiteraka fandrahonana sy fanagadrana ireo mpikatroka amin'ny aterineto izany, ary ny fitoriana azy ireo any amin'ny fitsarana raha ilaina izany.
Manana lalàna manjavozavo sy midadasika marobe i Oman izay mahatonga ny fanehoana ny tsy fitovian-kevitra sy ny fitsikerana ny manampahefana na ny mpitondra ao amin'ny firenena ho heloka bevava.
Ohatra, milaza ny andininy faha-17 amin'ny lalàna momba ny heloka bevava amin'ny aterineto fa iray volana ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina no sazin'ireo voaheloka amin'ny fampiasana ny teknolojian'ny serasera sy ny fampahalalam-baovao sy ny fizarana fitaovana izay “mety hanohintohina na hanitsakitsaka ny etikam-panjakana.” Raha manome ny sazy an-tranomaizina mitovy amin'izany ihany koa ny andininy faha-19 ho an'ireo izay hita fa meloka tamin'ny fizarana sy ny fananana votoaty “mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka na ny soatoavina ara-pivavahana”.
Tamin'ny 19 Jolay, nampiantso ilay mpikatroka amin'ny Aterineto Ghazi Al-Awlaki ho any amin'ny paositry ny polisy any amin'ny faritr'i Dhofar ny Sampan-draharaha Manokana ISS, noho ny hetsika milamina nataony tao amin'ny tambajotra sosialy. Notanana hatramin'ny 7 Septambra izy, tsy afaka naka mpisolovava na fianakaviana.
Mikasa ny hametraka ho ara-dalàna ampahibemaso ny lamina famoretana ataon'i Oman ny lafatry ny Foibe Fiarovana Anjotra. Nolaniana mangingina ity fepetra mampidi-doza manitsakitsaka ny zo nomerika ho an'ny olom-pirenena rehetra ity, ao anatin'izany ny an'ireo mpikatroka amin'ny aterineto Omani, ary tsy notaterin'ireo mpampahalala vaovao isankarazany.
Tokony hofoanan'ny governemanta ao Oman avy hatrany ity didim-panjakana mametraka ny lafatry ny Foibe Fiarovana Anjotra ity mba hiarovana ny toerana malalaka ho an'ny olom-pirenena hampiasa ny zony ara-drariny amin'ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny aterineto. Tokony hatsahatry ny manampahefana ny endrika famoretana rehetra atao amin'ny fanehoan-kevitra hafa amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.
Ny andraikitra amin'ny fiarovana ny aterineto sy ny fanaovana izany ho fitaovana manampy amin'ny fananganana ny hoavy miroborobo ho an'ny olom-pirenena rehetra dia tsy maintsy ankinina amin'ny vondrona akademika mahaleotena sy ireo mpandala ny teknolojia miasa miaraka amin'ny Ministeran'ny Teknolojia sy ny Serasera ary ireo rafitra sivily hafa izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitantanana ny aterineto amin'izay mba ho ferana amin'ny famahana ny olana amin'ny karazana heloka bevava fotsiny ihany ny iraka ataon'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-pirenena.